Madaxweyne Muuse Biixi oo shir guddoomiyay shirka Golaha Wasii... | Universal Somali TV
Fadhigii 60aad ee Golaha Wasiirada Somaliland ku yeeshay habka maqalka iyo Muuqaalka (Video Conference) oo uu shir guddoominayay Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, waxa maanta lagaga hadlay xaaladda guud ee amniga, heerka xanuunka COVID-19 iyo halka uu marayo la dagaalankii lagu hayay ayaxa ku habsaday qaybo ka mid ah dalka.
Ugu horayn waxa warbixin goluhu ka dhegeystay Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland, oo ku sugan in muddo ah isaga iyo xubno kale oo xukuumadda ka tirsani degmada Ceel-afweyn oo ay u jooggaan daminta arrimihii nabadgelyada la xidhiidhay ee halkaasi ka jiray, waxaanu golaha uga xog waramay meesha uu marayo dadaalkii nabadayntu oo uu xusay in ay si dhakhso ah u soo geba-gabeen doonaan xurguftii dhexmartay beelaha walaalaha ah ee Ceel-afweyn, waxaana uu sheegay in toddobaadka soo socda ay is horfadhiisan doonaan waayeelka dhinacyada wax kala tirsanayaa, sidoo kale waxa isna xoojiyay Wasiirka, Wasiir Kuxigeenka Arrimaha Gudaha oo ka hadlay xaaladda amni ee dalka, xusayna in guud ahaan amniga dalku fiican yahay wax dhibaato ah oo gobolada iyo degmooyinka ka jiraana aanu jirin.
Dhinaca kale Wasiirka Horumarinta Caafimaadka ayaa golaha uga warbixiyay xaaladda xanuunka COVID-19, waxaanu xusay in weli dalka uu ka jiro xanuunka COVID-19, balse ay muuqato in uu hoos u dhacayo xanuuunku. Isagoo golaha la wadaagay in dadaaladii la waday ay suurta geliyeen in la helo qalabkii loo baahnaa, waxaana uu sheegay in ay mashiinka lagu baaro xanuunka COVID-19 la geeyay Magaalooyinka Burco iyo Berbera oo ay shaqaynayaan, waxa kale oo uu sheegay in ay samayn doonaan baars guud (random test) oo ay ku ogaanayaan heerka xanuunka ee deegaanada Somaliland.
Waxa kale oo uu sheegay in ay wax ka qabteen adeegga baabuurta gargaarka degdega ah ee loo yaqaan Ambulance-yada ee Isbitaalada, dhawaana ay saddex Ambulance oo cusub geyn doonaan isbitaalada Ceergaabo, Laascaanood iyo Boorama, halka Burco ay horey u geeyeen isla markaana ay dayac tireen Ambulance-yada isbitaalka Berbera, waxaana uu intaas ku daray in isbitaalka Hargeysa ay u qorsheeyeen laba Ambulance oo cusub.
Waxaanu xusay in ay Somaliland ku soo wajahan yihiin lix mashiin oo ah kuwa dhaliya ogsijiinta (Oxygen), oo lagaga maarmi doono baahidii loo qabay ogsijiinta, sidoo kalana ay dalka soo gaadheen 410 haamood (Oxygen Cylinders,) oo ah kuwa lagu shubo ogsijiinta loona qaybshay issbitaalada Somaliland oo idil, horaantooduna ay gaareyo toddobaadka soo socda.
Sidoo kale Wasiirka Horumarinta Beeraha ayaa golaha uga warbixiyAy in ay meel fiican u marayso dAdaalkii loogu jiray dabargoynta ay kula jireen Ayaxa, waxaanu sheegay in wejigii koobaad ee hawlgalka oo ka socday Gobolada Galbeedka uu soo dhammaday, toddobaadka soo socdana laga hawlgali doono Gobolada Bariga Somaliland, iyadoo diyaaradaha ayaxa lagu buufinayo ay fadhiisin ka samaysan doonaan Garoonka Diyaaradaha Burco.
Wasaaradda Shaqo-galinta, Arrimaha Bulshada iyo Qoyska ayaa golaha horkeentay Siyaasadda Shaqo-abuurka Somaliland, oo ah siyaasad Somaliland ku hageysa, sidii bulshadu u heli lahaayeen shaqooyin, isla markaana looga bixi lahaa shaqo la’aanta, waxana goluhu u ballamay in la soo darso siyaasadan, oo isla markaana lagu ansixiyo shirarka soo socda, dhanka kale waxa goluhu isla qaatay in waqti la siiyo dersidda Xeerka Shaqaalaha Dowladda oo golaha horey u yaalay.
Ugu dambeen Golaha Wasiirrada Somaliland ayaa bulshada ugu baaqay in aan la hilmaamin tilmaamaha iyo talooyinka lagaga hortagayo xanuunka COVID-19, ee ay wadaan bahda caafimaadku, iyagoo sidoo kale u mahadceliyay guddida la dagalaanka COVID-19, ee uu hoggaamiyo Madaxweyne Kuxigeenka Somaliland, Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Seylici).
Kan-xigaHachalu Hundessa oo lagu aasay Galbee...
Kan-horeWafdiga Madaxweyne Qoorqoor oo booqas...
54,540,817 unique visits